Ukuphazamiseka ngokocansi: ukuthembeka, ukubuyekezwa. Ukuphazamiseka ngokobulili kanye namathuba okukhulelwa
Kuphazamise ukulala ngokobulili njengendlela yokukhulelwa
Isenzo esiphazamisayo yisenzo sobulili, lapho i-penis isuswe khona esithweni sangasese ngaphambi kwesikhathi sokusondela kwe-ejaculation ukuvimbela ukukhulelwa. Ngalokhu kukhwabanisa, i-spermatozoa ayifaki uhlelo lokuzala owesifazane, okuyinto ezimweni eziningi ngaphandle kokuqala kokukhulelwa. Naphezu kokukhethwa okubanzi kwezinqubo zokwelapha zanamuhla (imininingwane yokukhetha izakhi zokuvimbela imithi ingafundwa lapha ), indlela yokuphazamiseka isenzo ethandwa kakhulu kubantu abasha ngokocansi kanye nemibhangqwana eqinile.
Indlela yezenzo eziphazamisekile
ukutholakala. Ukulala ngokobulili okuphazanyiswayo kukhululekile futhi kufinyeleleka, akudingeki ukuba ulandele isimiso sokuthatha izisu zomlomo, ukubala izinsuku eziphephile nokuvimbela isifiso sobulili ngokungabikho kwemithi yokukhulelwa;
lula. Abesifazane abaningi babhekisela kumaphilisi e-hormonal kanye ne-intrauterine spirals ngokubandlulula, ukukhetha noma ukuvuma isenzo esiphazamisayo;
ukukhanya kwezinzwa zokuthinta. Abesifazane nabesilisa abathile abafuni ukusebenzisa amakhondomu, bekhononda ngokunciphisa ubuzwe bepenisi nokuntuleka kokugcoba / injabulo. Ngesikhathi uxhumene nabo besifazane ophazamisekile, inqubo isondelene nemvelo, abalingani abaphazamisi nesivinini, okukuvumela ukuba uzwe ngokugcwele imizwelo emihle nemizwelo.
ingozi enkulu yokukhulelwa okungakahlelwa. Isenzo esikhungathekile njengendlela yokuvimbela ukukhulelwa akusizi ngalutho (i-Pearl index i-30-35%). Lokhu kuchazwa ukuthi i-spermatozoa yesiguli se-pre-sperm yesilisa iqukethe i-spermatozoa eyi-10-20 million, ukuze ukukhulelwa kweqanda ne-sperm kungabi khona. Ngisho noma lo mlingani enolwazi futhi ekwazi ukulawula ukujula, le ndoda ayikwazi ukuqukatha uketshezi olungaphambi kwe-saliva;
ukuzivikela ngokumelene nama-STD;
ukungabi namandla nokuqina.
Imithetho yokusebenzisa indlela:
ngaphambi komuntu indoda kufanele iguze, ugeze izitho zangasese;
isisu akufanele siwele emzimbeni wesifazane sangaphandle, ngakho-ke ukujula kufanele kwenziwe ngasendaweni elithile ukusuka kwesifazane;
Uma kwenzeka eziphuthumayo, kunconywa ukuba njalo ube ne-spermicide endaweni (amakhandlela, ukhilimu);
Ukuze usebenzise le ndlela yokuvimbela ukukhulelwa kungabantu kuphela abanolwazi olubanzi kwezocansi, abangakwazi ukulawula ukujula kwabo ngokuphelela. Isikhathi sokususwa kwelungu eliphuma esigabeni sowesifazane kufanele sinqunywe ngaphandle kwephutha;
uma uhlela ukuxhumana naye ngokocansi ilungu kufanele lihlanzwe kahle, ngaphandle kwalokho isidoda singase sihlale esikhunjeni sesikhumba.
Amandla okukhulelwa isenzo esiphazamisayo
Uma unamathela ngokuqinile emithethweni yokuphepha futhi usebenzise ngokufanele ukuphazanyiswa kwesenzo, amathuba okukhulelwa angama-90%. Ezinsukwini zokugcina nezinsuku zokuqala zokuhamba esikhathini, ithuba lokukhulelwa ingane lincane kakhulu, ngoba phakathi nalesi sikhathi umzimba wesifazane awunayo iqanda elungele ukukhulelwa. Kodwa i-100% isiqiniseko asikho, i-ovulation inekhono lokushintsha elihlobene nomphakathi womjikelezo. Ezimweni ezingavamile, ukukhulelwa kungenzeka ngosuku lokugcina / lokuqala lokuya esikhathini, ngesikhathi sokuya esikhathini. Ngokucophelela kudingekile ukuvikelwa emva kwezinhlobo - umjikelezo wokuya esikhathini uncitshiswa, kunzima ukubala isikhathi esiphephile sokulala.
Ukuphazamiseka ngokobulili kanye ne-HIV
Esimweni senkinga ye-AIDS / i-HIV, ukulala ngokobulili okungavimbelwe kubaluleke kakhulu. Indlela yokudlulisa igciwane ngesandulela ngculaza kungenzeka ngezenzo eziphazanyiswayo, lapho i-agent esebenzayo isetshenziselwa ukuvinjelwa kwamasipha noma isilwane sidlula nge-microcracks ku-mucosa ukuya egazini. Ngokuqeda ukuthintana ne-HIV equkethe uketshezi lwegciwane lesandulela ngculaza, ukudluliselwa kwegciwane kungavinjelwa, noma kunjalo, uketshezi lwesisu okukhulunywa ngalo ngesikhathi sokulala nomzimba wengculazi kuqukethe ne-HIV-leli vuli elincane lanele ukwedlulisa ukutheleleka.
Imiphumela yesenzo sokuphazamiseka kwabesilisa nabesifazane
Ngokuxhumana kocansi okujwayelekile, ukujula kufanele kuvele ngaphandle kokubamba iqhaza ngokwemibandela, kucabange. Nge-PPA, indoda iphoqeleka ukuba ilinde isikhathi eside ngesikhathi sokujula, i-orgasm. Ngenkinga enkulu yokufisa, uphazamisa isenzo esicacile, uyasusa ipeni kusuka ebiswini kanye ne-ejaculation kwenzeka ngaphandle kwamalungu omzimba wesifazane. Ukuguqulwa okungazelelwe kokuzijabulisa ngokuvinjelwa okungalindelekile kubangela ukuphazamiseka kwezinqubo zezinzwa zokuvimbela nokuzwakalisa, kuphazamisa ukuhamba kwabo, kubangela ukuphazanyiswa ekusebenzeni kwesistimu yezinzwa eziphakathi, ukwakheka kwe-neurosis, ukwehluleka komsebenzi wezinhlelo zangaphakathi / izitho, ukukhishwa kwe-ejaculation engakapheli, nokulimala kokulungiswa.
Ubude be-coitus ngayinye nobuhlobo bobulili obuphazamisayo bukhulu kunezinga elijwayelekile, okuholela ekuqothulweni kwezikhungo ze-erectile zomgogodla nokungabi namandla. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokungena okwanele kwegazi ezithombeni zobulili zamadoda, ukuguqulwa kwe-neuro-trophic kuvele. Esikhathini se-prostate gland, i-hypereia congestive ihlanganiswa eholele ku-prostatitis, i-urethra yangemva kwesimo kanye ne-tubercle edema ye-seminal. Ngokuvamile kukhona "i-atony" ye-prostate, lapho inqubo evuvukalayo eqala ngayo.
Kuwesifazane, isenzo sokuphazanyiswa sigcwele ukungezwani okuqhubekayo, okuvimbela i-orgasm ephelele. Ngokwezibalo, abesifazane abangama-50-60% abane-anorgasmia bajwayele ukuqhuba i-PAP. Enye i-nuance: ngokuphambene nokulindelekile, indlela ayivikela ekukhulelweni okungafuneki, kodwa uma owesifazane ethemba umlingani wakhe noma inkinga yokukhulelwa ayifanele, khona-ke akufanele kube nobunzima kwezocansi.
Umbiko ophazamisekile: ukubuyekezwa kodokotela
Izazi zengqondo ziphikelela ukuthi umuntu owenze isinqumo ebuhlotsheni obesifazana ohlala njalo ukuze athathe amakhondomu ku-PAP, ezingeni eliphansi, usekulungele ukuba ngubaba. Kusukela ekuboneni kwezokwelapha, ukuphazanyiswa kwesenzo akukwazi ukubhekwa njengendlela yokukhulelwa, ngaphezu kwalokho, uma i-PAP isetshenziswa isikhathi eside ngokukhulelwa, le ndoda isongelwa nge-prostatitis engapheli nokuntuleka kocansi. Ngakolunye uhlangothi, ukuphazamiseka kobulili kuyisiphephelo kunezokwelapha zokubeletha kanye ne-intrauterine. Odokotela batusa ukungasebenzisi kabi iPAP futhi basebenzise indlela kuphela ngomlingani ovamile oqinisekisiwe.
Ukubhaka ama-pancake okumnandi nge-yogurt, izindlela zokupheka ezinhle kakhulu ngesithombe
"Uma umuntu engalweli uthando, akayithandi," ingqondo
UVictoria Beckham ubonisa eShanghai
Intukuthelo yinkinga yokuphila iningi lethu
Amakhemikhali aqoshiwe asetshalwe ekhaya